ATAORANA NY TRANO AN-TRANO ANAO ao anatin'ny 7 andro amin'ny vidin'ny ZERO. - World Trade Exchange
ny fomba fandoavana ny trosa ao anatin'ny 24 ora amin'ny vidin'ny ZERO
ny fomba fandoavana ny trosan'ny orinasa ao anatin'ny 24 ora amin'ny vidin'ny ZERO.
Reraka ve ianao amin'ny fihenjanana, ahiahy, henatra ary fatiantoka ateraky ny fandevenana trosa isan'andro?
Te handoa ny trosanao ao anatin'ny fito (7) andro ve ianao nefa tsy averina?
Avy eo, mila miditra ao ianao World Trade Exchange (WTE) mpikambana ankehitriny.
WTE dia hanampy anao amin'ny fandoavana ny trosan'ny trosanao amin'ny olona tsirairay, ny andrim-panjakana ara-bola na ny fikambanana nefa tsy mila mandany vola ianao. WTE Handray an-tanana ny trosanao sy ny adidy ara-bola rehetra anananao ary hahatonga anao tsy hanana trosa 100%. Tsy mila asa, tsy misy ezaka, tsy misy fotoana, ary tsy tokony hividianana vola ianao, mba handoavana ny trosanao rehetra.
Na ny habetsahan'ny trosa dia $ 1M, $ 100M, $ 10B, na mihoatra, tsy maninona izany. World Trade Exchange mandamina trosa amin'ny anaranao.
Nanampy trosa sy orinasa an'arivony izahay hanala ny trosany, ary afaka manampy anao izahay hanafoana ny trosanao rehetra haingana kokoa noho ny noeritreretinao hatao.
Na mahatratra hatrany amin'ny 100 tapitrisa $, $ 100 miliara na mihoatra ny vidim-piainana misy anao dia tsy maninona izany